तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी चुनौती दिँदै गर्दा देउवाको पक्षमा विपक्षी गठबन्धनले १४९ जना सांसदको बहुमत जुटायो । र, नेताहरु अहिले सरकारमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्रै शीतलनिवास पुगेका छन् । तथापि शीतलनिवासमा​ राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई निकैबेर भेट नदिई कुराएकी छिन् । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा सुन्दा विपक्षी दलले बहुमत जुटाउन सक्दैनन् भन्नेमा उनी ढुक्क देखिन्थे ।
त्यसैले उनी सम्पादकहरुसँग भन्दै थिए कि बहुमत जुटाउनोस्, नभए मलाई सघाउनोस् र संसद विघटन हुनबाट जोगाउनोस् ।
तर, प्रश्न अहिले पनि प्रवल छ, के केपी शर्मा ओली बाहिर बोलेजस्तै सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छन् त ? कि अबको एक घण्टाभित्र फेरि बालुवाटार र शीतलनिवासले अर्को कुनै बखेडा झिकेर सत्ता हस्तान्तरणमा बखेडा उत्पन्न गर्ने सम्भावना जीवितै छ ? संकेत त्यस्तै देखिएको छ । किनभने, आफूसँग एमालेका १२१ जना सांसदहरु रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतलनिवास पुगेको खबर छ । जबकि उनकै दलका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विपक्षी नेताहरुसँग शीतलनिवासमै राष्ट्रपतिलाई भेट्न शरीर पुगेका छन् ।
माधव पक्षका सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले ओलीसँग १२१ सांसद नरहेको कागजबाटै पुष्टि हुने कुरा हो । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलगत रुपमा नभएर व्यक्तिलाई मात्रै चिन्ने संविधानविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।